वयस्कों को लागि नि: शुल्क डाउनलोड मंडलस र उनको रंग
वयस्कों को लागि मंडलस रंग
मंडला संस्कृतबाट आउँछ र सर्कलको अर्थ हो। मन्डलस ग्राफहरु हो जुन सममित वा अतुल्य पैटर्नहरु जुन ब्रह्मांड को माइक्रोकोस को प्रतिनिधित्व गर्दछ।
मंडल के हुन्?
ढाँचाहरू सधैं केन्द्रित छन् र सामान्यतया राउन्ड वा वर्ग। यदि तपाईं प्रकृतिमा वरपर हेर्नुहुन्छ भने, तपाईं हरेक ठाउँमा मन्डलस पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ।
उदाहरणका लागि, फूलहरूमा, रूखको रङ्गहरू, बर्फफ्ल्याकहरू, कपालको माध्यमबाट, जुन पानीमा फेंकिएको छ र यसको सर्कलहरू आकर्षित गर्दछ ...
मंडलहरू बौद्ध र हिन्दू धर्ममा धार्मिक अर्थ राख्छन्। बौद्धको माध्यमबाट, मंडलहरू मनन वस्तुको रूपमा फैलिएका छन्। र आज विश्वभरको चिनिन्छ। मंडलहरू प्राकृतिक सामग्रीबाट बनाइएका वा रेतसँग छिराउन सकिन्छ। यस देशमा मन्डलस रंगको लागि धेरै लोकप्रिय छन्।
किन मन्डलस रङ?
मंडलस केवल ध्यानको लागि एक उपकरण मात्र होइन, तिनीहरू पनि जवान र वृद्धको लागि एक अचम्मको चल्ला हुन्। त्यहाँ विभिन्न कठिनाईको स्तरमा मंडलहरू छन्। सरल देखि परिष्कृत। मन्डलसहरू यहाँ र अहिले जान्न मद्दत गर्छन्। तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ संग पूर्णतया सम्झौता गर्न। यो रंगमा फोकस गर्छ, जुन एकाग्रतालाई बढावा गर्दैन, तर विचारहरूलाई पनि शान्त गर्दछ।
ढाँचामा राखिएको रङले अराजकतालाई व्यवस्थित गर्दछ र तस्विरमा सम्वन्ध ल्याउँछ। यदि तपाईं पेपरमा अर्डर ल्याउनुहुन्छ भने, तपाईलाई अझ बढी अर्डर ल्याउनुहुन्छ। तपाईं आफ्नो भित्री जीवन मा यात्रा गर्न र दैनिक जीवन को हलचल र हलचल बिर्सनुहोस्। रचनात्मकता प्रोत्साहन गरिन्छ र तपाईंको आफ्नै कल्पना उत्तेजित छ। शान्त कुनामा, पृष्ठभूमिमा वा एक कप चियामा शान्त संगीत संग तपाईं अझ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ।
लिंकमा क्लिक गरेर पृष्ठले सम्बन्धित मन्डलासँग खोल्छ।
बच्चाहरु र वयस्कों को लागि पोशाक
वयस्कहरूको लागि पृष्ठ फूलहरू रंग गर्नुहोस्
वयस्कों को लागि पृष्ठ कोला रंगीन